> Resource > Lugood > 3 Siyaabaha la yareeyo awoodda Lugood Library Your
Tani waa habka ugu fudud in la helo oo dhan songs labalaabka maktabadda Lugood ee kaliya click ah. Waa maxay dheeraad ah, waxaa macluumaadka loogu talagalay oo dhan music ah oo ay ku jiraan macluumaad track, farshaxanka album iyo lyircs ka heli kartaa. Baro More >>
Waa maxay maktabadda Lugood ugu weyn? Ma jiro size maktabadda ugu badnaan farsamo Lugood. Laakiin weyn Lugood maktabadda le'eg yahay, ka gaabis Lugood si aad u soo jeedin doonaa. Maqaalkani waxa uu la wadaagi doonaa 3 si loo yareeyo Lugood maktabadda size in ay sii daayaan boos lacag la'aan ah iyo dardar Lugood aad.
In la yareeyo tirada files music
Cabbirka files music aad bay u kala duwanaan karaan ka-beegyada kala duwan sida heerka yara iyo channels. Haddii aadan sida faquuqa sida qaar ka mid ah enthusiast music, heerka yara 192 kbps waa ku filan oo tayo leh. Sidaas sida loo yareeyo xajmiga files music? Eeg gaarka ah ee hoos ku qoran:
1. marka hore u tagtaa Lugood> rabtid> General> Import Settings > MP3 Encoder iyo tayada qarka u saaran inuu Sare Quality (192 kbps).
2. Samee Smart playlist ka File> New Smart playlist.
3. Set "Rate Inyar ka sii weyn tahay 192" sida qodobada si aad u ogaato dhammaan faylasha music kulan.
4. Dooro dhamaan files music by Command + A ama jiidayeen.
5. midig u guji dooro Abuur MP3 version. Tani waxay qaadan doontaa waqti badan haddii ururinta music aad waa mid aad u ballaaran.
6. Waxaad tagtaa Library> Music iyo show tus by File> tus ka Display.
7. Sort by Rate Inyar (column Haddii heerka yara uusan ka muuqan, xaq guji column iyo dooro Rate wax Inyar ayaa lagula talinayaa in aad ku celi habkan si ay u muujiyaan column Size si loo arko inta uu le'eg yahay waxaa hoos u file music kasta -. Ka 256 in 192, oo ku saabsan 3MB -. song kasta)
8. Delete ee files music weyn.
Yeelo Maktabadaha Multiple Lugood
Noqo default, aad files warbaahinta, sida video, bandhigyada TV, music, podcasts, waxaa lagu keydiyaa maktabadda isla Lugood. Si kastaba ha ahaatee, waxaad iyaga sperate karaa iyadoo la abuurayo maktabadaha kala duwan in ay ku kaydiso noocyada kala duwan ee files. Waxaa kale oo aad u fudud in u kala bedesho maktabadaha kala duwan. Si aad u samayn, oo kaliya hoos u hay Option (ama wareeg for Windows) marka laga bilaabo Lugood si ay u doortaan maktabadda ama abuuro mid cusub. dheeraad ah oo ku saabsan maktabadda Lugood Baro halkan .
Delete tus in Lugood
Tus in Lugood sidoo kale waa sababta ugu wayn ee maktabada Lugood yahay si markaas waaweyn. Si aad u tirtirto tus in Lugood, u tag Music, Movies, TV muujinaysaa, iwm guji File / Display Akownnada si ay u muujiyaan oo dhan nuqul in Lugood. Ka dibna iska saar faylasha weyn ama ka weyn. Eeg faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo maktabadda Lugood saarto tus ka >> .